Ama-Injini Yokusesha Ye-Google
Iwebhu & Usesho Izinjini Zokusesha
Injini Yokusesha Ye-Google
by UMarziah Karch
Uma sicabanga nge-injini yokusesha njenge-Google, sicabanga ngomsebenzi oyinhloko wokusesha iwebhu oyothola ekhasini eliyinhloko le-Google. I-Google inenqwaba yezinjini zokusesha ezinemisebenzi ekhethekile kakhulu. Lezi zinjini ezihlukile zokusesha zibhekwa njengezi-injini zokuhlola eziqondile . Ezinye izibonelo ezisuka ku-Google esidlule nezamanje zihlanganisa:
Usesho Lwesithombe se-Google
Ukusesha Ibhuku le-Google
Usesho lwe-Google Patent
Ukusesha Ibhulogi ye-Google
Usesho lwe-Google US Government (Usomama Sam Usesho)
Usesho lwangasese lwe-Google
Usesho lomkhiqizo we-Google
Lezi zonke ziyizinjini zokusesha ezingafani (ezingaba zikhona) ezingahle zibhekwe ngabanye. I-Google iye yathuthela ngokuya engxenyeni yokusesha yonke indawo, kodwa lokho okwenziwe ngempela yilokho ama-winks enjini yokusesha angafaka ukuhlanganisa ama-verticals emiphumeleni eyinhloko. I-Google isebenzisa lokho abakwaziyo mayelana nemibuzo evamile kanye nama-semantics ukuze kubone ukuthi uma uthayipha "izithende ezibomvu eziphezulu" ungase ungabheka ngokuqondile kumawebhusayithi akhuluma ngezithende eziphakeme. Ungase ufune ukubona izithombe zezithende eziphezulu ezibomvu, kungenzeka ukuthi usanda kuzwa okuthile ngezicathulo ezimbalwa ezindabeni, kungenzeka kube nevidiyo ekhuluma ngabo, noma ungafuna ukuqhathanisa isitolo.
Imiphumela izovame ukukhombisa ukusikisela okuhlukahlukene futhi ikuvumela ukuthi uchofoze kumphumela wosesho noma faka usesho oluqondile. Uzobona izixhumanisi ezithi izinto ezinjenge "Amavidiyo amaningi wezithende ezibomvu eziphezulu," "Izithombe zezithende ezibomvu," "Imiphumela yokuthenga yezithende ezibomvu eziphakemeyo" noma "Izindaba zezithende ezibomvu eziphakemeyo." Isimo emiphumeleni yakho yosesho sincike ekutheni kungenzeka ukuthi i-Google icabanga ukuthi yiluphi uhlobo lomphumela ofuna ukuyibona. Kule mibuzo ethile, imiphumela yezindaba yafika ekugcineni. Ukuseshwa okunye, ungase ubone ukuxhumana ku-Google Maps.
Ngesinye isikhathi, kunokuba isixhumanisi sokukuyisa kwenye injini yokusesha, uzothola izinketho ohlangothini lokucubungula usesho olusenzile kakade. Ukusesha kwe-recipe ngokuvamile kuphelela ekunikezeni izinketho ngakwesokunxele kwefasitela lamakhalori noma isikhathi sokulungiselela.
I-Bing ne-Yahoo! ube nokukhanya kahle. Iningi lomncintiswano ongewona we-Google uthatha imigqa yawo kusukela ku-Google kule ndawo, kodwa eminyakeni edlule ukusesha okuqondile kubuye kwazakhela ngokuphelele. Imibiko yezindiza ye-Google ivela engxenyeni yokusesha i-Google etholakalayo, kodwa injini yokusesha yasungulwa ekuqaleni kwezinto zokuthenga izinjini ezifana ne-Orbitz ne-Travelocity. Isasebenza, kodwa imiphumela nayo ifakwe ekusesheni kwe-Google jikelele futhi ingahlolwa kusukela ku-Google.
Kufanele Usebenzise Nini Usesho Oluqondile?
Uma wazi ukuthi ufuna ukuthola isithombe, sebenzisa usesho lwe-Google Image kusukela ekuqaleni. Ngokufanayo nezindaba, amabhulogi, amadokhumenti ama-scholarly, noma amavidiyo. Yeqa umuntu ophakathi. Uma ungeke ukhumbule ukuthi ungayithola kuphi injini yokusesha, ungakwazi ngempela nje i-Google igama le-injini yokusesha ukuze ufike lapho. Ungase ucabange ukuthi kulula ukuthayipha umbuzo wakho wokusesha wangempela futhi uchofoze isixhumanisi "seZithombe ..." futhi kaningi lokho kuyiqiniso. Noma kunjalo, i-Google ayibikezeli ngokuphelele uhlobo losesho oludingayo. Izikhathi eziningi singena emibhalweni yokusesha ejwayelekile, futhi ayikho isiqinisekiso se-Google esizoyihlola.
Enye into okufanele uyiqaphele yilapho usuke ulahlekile ngokungaqondakali kusuka enjini enkulu yokusesha. Kungenzeka ukuthi uchofoze ngokuqondile ngakwesinye isikhathi ekusesheni kwakho. Ngokuvamile akuyona inkinga uma uthole ukuthi yini oyifunayo, kodwa ngezinye izikhathi lelo phuzu liphela liba yindlela engalungile. Uma ubona imiphumela eminingi engenzi umqondo, njengamaphikishi kuphela noma akukho miphumela yento okumele ibe lula ukuyithola, zama ukubuyela ku-www.google.com bese uqala ukusesha kwakho futhi.
Uma ungumabhizinisi noma i-blogger ezama ukuphawula, ungase ukwazi ukusizakala ngokuseshwa okuqondile. Uma unenhlanhla ngokwanele ukubeka kahle ekusesheni kwe-Google Image, ngokwesibonelo, ungathola eziningi zethrafikhi kusuka kubantu abathinta umphumela wesizukulwane bese beqaphela ukuthi empeleni bafuna isithombe. Yisizathu esisodwa isizathu sokuthi abaningi be-blogger babeka izithombe kuzo zonke izinto. (Akusiyo kuphela isizathu. Izithombe nazo zibambe amehlo ekuthunyelwe kabusha kwezokuxhumana.)
Ngezinye izikhathi ukusesha kuzodalula ukukhanya okwakungakaze uqaphele ukuthi kukhona. Zama ukuchofoza kuso ukuze ubone ukuthi ungayitholaphi.
Indlela Yokuthola Nokusebenzisa Izinjini Zokusesha Zomsindo
Ukugwema i-Black Hat Search Engine Optimization
Umehluko Phakathi Kokuphonswa NgoLwesine no-Flashback ngoLwesihlanu
Ingabe Izinjini Zokusesha Ziyazi Konke?
I-Pirate Bay: Kuyini?
Indlela Yokuthola Ukufundwa Okudume Kakhulu kuWebhu
Indlela Yokwabelana Ngendawo Yakho Usebenzisa i-Google Maps
Konke Mayelana ne-Google News
Indlela Yokufinyelela Yahoo Mail ku-Outlook.com
Ungakukhubaza kanjani ukwabelana ngefayela ku-Shareaza
Ikholi Yezinkohliso Zomsebenzi
Amageyimu ama-10 aphezulu kakhulu namageyimu we-PC yeDragons okuzowathenga ngo-2018
Ivumela ukulandelela Izinguquko ku-Microsoft Word for Mac
Ukuguqula Amakhodi EmaMaya - Ukulinganisa Umthambo WaseCampagne
Indlela Efanele Yokuvula I-Gmail Kusuka Ngaphakathi Kwemeyili Ye-Outlook
I-Blu-ray ne-Blu-ray Abadlali Besiqondiso
Indlela Yokwenza Ngokwemvelo I-Desktop Yedesktop Desktop
I-AeroAdmin 4.5 Isibuyekezo
Ukungqubuzana phakathi kwama-routers, ama-Switches namaHubhu
Iyini Inthanethi ye-WiMAX?
Amathiphu Ukulahlekelwa Isisindo Ukusebenzisa i-iPhone ne-iPod
Izinto 7 Ongayenza Uma Ushintsha I-iPhone Carriers
Indlela Yokuguqula Amafomu E-Equalizer Audio Stereo
I-FAQ: Ingabe Umshwalense We-Cell Phone Uzokugcina Imali?
Ama-Header and Footers e-Word 2010
Imicimbi emikhulu Emlandweni we-Computer Networks
Indlela Ukuhamba Kwezimoto Kusebenzisa I-Smartwatch
Indlela Yokuqeda Ifoni Yakho Ye-Android Yamahhala
AmaKhokhi ekhibhodi avamile
Indlela yokulungisa i-Blue Screen of Death